कलाकारको कठालोमा नेताको हात - विशेष - साप्ताहिक
कलाकारको कठालोमा नेताको हात
केपी ओलीको झटारो धुर्मुसलाई
एउटा कलाकारले नेता भै टोपलिन सुहाउँछ ? नेताले नेताको काम गर्नुपर्छ । कलाकारले कलाकारको ठाउँमा बस्नुपर्‍यो नि । यस्तै ताल हो भने अव यो सरकार टुलुटुलु हेरेर बसिरहँदैन । कलाकारले समाजसेवा गरेर चुनावमा उठेर जित्यो भने १४/१४ वर्ष जेल बसेका हाम्रो भविष्य के हुन्छ ? धुर्मुसले त्यो सोच्नु पर्दैन । भूकम्पमा यसो २/४ जना सँग चन्दा मागेर १/२ घर बनाए ठिकै छ नी त भनेर छोडिदिएको त उसलाई त आफू नेतै भएँ पो भन्ने परेछ । हुँदा–हुँदा क्रिकेट रंगशाला बनाउने ? देखुम्ला नि त हामी पनि । भन्छन् नि केलाई के भयो भने के हुन्छ रे त्यस्तै होला नि ?
देउवा झम्टिए दमनमाथि
जहिल्यै मलाई जिस्क्याउने, होच्याउने यस्तो पनि हुन्छ काहीं ? अरे बाबा, मेरो बोली नै यस्तै छ त दमनले जिस्क्याएर मेरो बोली राम्रो हुन्छ भन्या । थपक्कन राम्रो बोल्नु आफ्नो बोली जस्तो छ त्यस्तै बोल्नु भैहाल्यो नि । देशमा यत्रा–यत्रा विषय छन् मेरै क्यारिकेचर किन गर्नुपर्‍यो यिनलाई । मैले डेमोक्रेसीका लागि लड्दा जिब्रै यस्तै भयो त के लाग्छ । अझ तीन पटक प्रधानमन्त्री हुने योग भएको मान्छेलाई यसरी जिस्क्याउन सुहाउँछ ? अबको प्रधानमन्त्री हुने पालोसम्म पनि यस्तै चाला रहे उ गरेर उ हुन्छ अनि आफैं उ हुन्छन् ।
कलाकार प्रचण्ड कि घनश्याम ?
माने के भनेदेखि घनश्यामजी, तपाईं मेरो ठयाक्कै नक्कल गर्न खप्पिस हुनुहुन्छ । माने तपाईं आफूलाई मात्र महान कलाकार नसम्झनुहोला । म पनि १० वर्षे जनयुद्ध लडेर शान्ति प्रक्रिया हुँदै पटक–पटक कलाकारिता गरेरै प्रधानमन्त्री भएका व्यक्ति हुँ । मलाइ एकै छिनमा रुन पनि आम्छ, हाँस्न पनि आम्छ, जनतालाई रुवाउन पनि आम्छ । माने, चुट्किला भनेर हँसाउन नसके पनि मेरा सहअध्यक्ष कमरेडले
चुट्किला दिएर हसाम्न सक्नुहुन्छ । अब त मैले पनि धेरै चुट्किला सिकिसकेको छु । माने, मलाई धेरै सेन्टिमेन्टमा नल्याउनुहोला मेरो क्यारिकेचर गरेर । यदी मैले तपाईंको क्यारीकेचर गरिदिएँ भने तपाईंको पेसा संकटमा पर्छ । यसलाई धम्की नसम्झनुहोला एकीकृत ठूलो पार्टीको अध्यक्षको आग्रह सम्झनुहोला ।
बाबुराम छुट्याउन ज्योतिलाई चुनौती
ज्योतिजी, तपाईंले त हाम्री हिसिलाज्यूलाई दोधारमै पारिदिनुभयो । हुन त द्वन्द्वकालमा कम्रेड प्रचण्ड पनि म को हुँ भनेर द्विविधामै हुनुहुन्थ्यो । शान्ति प्रक्रियामा आएपछि मैले खेलेको भूमिकालाई लिएर पनि उहाँको दुविधा हटेन । पार्टी फुटाएपछि मेरी श्रीमती त दोधारमा हुनुहन्न होला भन्ने लागेको थियो फ्याट्ट तपाईंले मेरो क्यारिकेचर गरीदिन थालेपछि त उहाँ पूरै संकटमा पर्नुभएको छ । त्यसो त धेरैजसो समय म आफैं पनि दोधारमा हुन्छु म को हुँ भनेर । डाक्टर भएर जनयुद्धमा होमिए । जिन्दगीभर लिएको मार्गदर्शन छोडेर यो उमेरमा सिद्धान्तविहीन भएको छु । आखिर मै हुँ कि को हो ?
अब खाना ख्वाउने रोबोटिक हात